QM iyo Midowga Yurub oo war kasoo saaray xaalado kusoo wajahan Soomaaliya. | Dayniile.com
Home Warkii QM iyo Midowga Yurub oo war kasoo saaray xaalado kusoo wajahan Soomaaliya.
QM iyo Midowga Yurub oo war kasoo saaray xaalado kusoo wajahan Soomaaliya.
–War qoraal ahaa oo ay si wada jiraa u soo saareyn Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub ayee kaga hadleen xaalada Soomaaliya gaar ahaan dhibaatooyinka Caalamiga ah sida Cudurka Safmareenka ee COVID-19, Gurmadka cimilada, Wasakheynta, Luminta noolaha, iskahor imaadka iyo masiibooyinka kale.
Qoraalka ayaa lagu baaqay in la qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu xoojinayo hababka wax soo saarka beeraha ee dalka Soomaaliya, sidookale waxey xuseyn in loo baahan yahay tallaabooyin deg-deg ah si wax looga qabto caqabadaha iyo saameynta taban ee la xiriirta nafaqo xumada Soomaaliya, oo leh qaar ka mid ah heerarka nafaqo xumada ugu sarreeya adduunka .
Qoraalka ayaa lagu yiri “Intaa waxaa dheer, dhibaatooyinka caalamiga ah sida COVID-19, gurmadka cimilada, wasakheynta, luminta noolaha, iskahorimaadka iyo masiibooyinka kale waxay muujinayaan khataraha iyo nuglaanta weyn ee nidaamka cuntada ee Soomaaliya, taasoo qatar ku ah aadanaha ayaa lagu yiri” bayaan wadajir ah oo soo sareen QM & Midowga Yurub.
Magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa waxaa Shir ku saabsan dood-cilmiyeedka Wada-tashiga Daneeyayaasha 14 illaa 16kii bishaan September ku yeeshay in ka badan 60 daneeyayaal oo Soomaaliya kala matalaya, kuwaas waxaa ka mid ah, Bulshada rayidka, Waaxda gaarka loo leyahay, Aqoonyahannada iyo Ururrada aan dowliga ahayn.
Wakiilka dalka Soomaaliya ee FAO Etienne Peterschmitt ayaa tilmaamay in xal u helida dhibaatooyinka gaarka ah ee nidaamyada cuntada ee Soomaaliya aysan kaliya u baahnayn fahamka xiriirka ka dhexeeya qaybaha nidaamka.
Wuxuu yiri “Markaan eegno xaaladda Soomaaliya, nidaamyada cunnadu waa muhiim si wax looga qabto baahiyaha dadweynaha si ay u cunaan cunto ammaan ah, u qaataan cunto caafimaad leh iyo inay yareeyaan cunno yarida iyo nafaqo -darrada,” ayuu yiri maamulaha barnaamijka Midowga Yurub Luca Pagliara.
Deegaanno dhowr ah oo ka tirsan koofurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaa ka jira abaaro ba,an iyo Cunto yari, iyadoo ay gurmad u sameeyaan dadkaasi ay abaartu saameysay Qaramada Midoobay & qaar kamid ah dalalka Midowega Yurub.
Previous articleCabdikariin Xuseen Guuleed “ Farmaajo iyo fahad dalka Fowdo iyo carqaladaynta Doorashada ayay wadaan haka waan toobaan.
Next articleMadaxweynaha waqtiga ka dhammaaday iyo Raisal wasaare Rooble oo ka tacsiyadeeyay geeridii Ajakis
Ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ayaa sheegay inay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ka dib dagaal culus...